Vaovao - Ahoana no hatao raha very ny lakilen'ny fiara?
Ivon-toerana fanamboarana fifandraisana
Configure lakile vaovao
Raha misafidy ny hampitaovana fanamboarana fanalahidy vaovao ianao, dia mila manome ny fiara sy ny karapanondron'ny tompony ianao. Araka ny maodely isan-karazany, ny tobin'ny fanamboarana dia mitaky ny tompony hanome teny miafina miady amin'ny halatra 17 isa ho an'ny lakile fanamboarana. Tsy nify io tenimiafina io fa tenimiafina omena ny tompony rehefa mividy fiara vaovao. Ho an'ny maodely sasany, ny gara dia manome ny mpanamboatra fiara ny taratasy fanamarinana momba ny fiara sy ny tompony. Ny mpanamboatra dia manontany ny tenimiafin'ny fanoherana ny halatra amin'ny alàlan'ny angon-drakitra ary alefa any amin'ny tobin'ny fikojakojana.
Aorian'ny fahazoana io teny miafina io dia mitaky ny tompona hanome ny laharana nify fanalahidy hanamboarana lakile vy vaovao ny gara. Raha tsy misy nomeraon'ny nify dia azonao atao ny manontany ny nomeraon'ny nify amin'ny alàlan'ny tahiry. Mandritra izany fotoana izany, ny tobin'ny fanamboarana dia afaka manova ireo masontsivana momba ny solosaina anaty fiara mba hametrahana ny lakilen'ny fiara very ho fanalahidy tsy ara-dalàna, saingy raha tsy azo atomboka ny fiara, ary mbola afaka manokatra varavarana ihany ny lakilen'ny very. Ity misy fampahatsiahivana ny fiara tompony: vantany vao hita fa very ny lakilen'ny fiara, na dia efa namboarina aza ny lakile vaovao dia tokony hitandrina ihany ianao mba tsy hitahiry entana sarobidy ao anaty fiara.
Azafady soloina ny hidim-baravarana mivantana eo amin'ny gara fanamboarana satria mbola misy ny risika very ny atin'ny fiara rehefa manova ny lakile, ny fanovana hidin-trano dia hanafoana tanteraka izany risika izany Na izany aza, ny sandan'ny fanovana hidin-trano dia lehibe kokoa noho ny fanalahidy vaovao, miankina amin'ny maodely sy ny fiara samihafa, ny hidin-trano no tsy mitovy. Ny maodely sasany dia mampiasa fanalahidy mitovy amin'ny varavarana, varavarana fitoeran'entana, varavarana fitoeran-tànana ary kapitalin'ny solika. Amin'izao fotoana izao, raha soloina ny hidin'ny fiara manontolo dia ampitahaina ny hidiny izay mila soloina.
Amin'ny ankapobeny, ny vidin'ny lakile vaovao dia miovaova amin'ny 300 yuan ka hatramin'ny 2.000 yuan, fa ny vidin'ny fanavaozana ny hidin-trano dia mety ho 4 ka hatramin'ny 5 heny noho ny fanoloana fototra, ary ny fanoloana fanalahidy dia matetika koa Tsy ao anatin'ny ny haben'ny fitakian'ny orinasa fiantohana, ka lafo kokoa ny vidiny.
Amin'ny ankapobeny, fanalahidy vaovao dia azo ampiasaina ao anatin'ny ora vitsivitsy, fa ny maodely lafo vidy avo lenta kosa dia mitaky fotoana bebe kokoa, satria ny fiara hafarana avo lenta dia mila mamita ny dingan'ny fitily sy manilika ny lakileny tany am-boalohany. Ny fiara avo lenta dia manana ambaratonga avo lenta amin'ny famakiana teny miafina sy ny vidiny mifanaraka ary avo kokoa.
Fotoana fandefasana: Aug-17-2020